Saxafiyiin Tababar ugu furmay Cadaado”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ururka suxufiyiinta maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ayaa tababar u furay wariyaal gaaraya 30 saxafi kuwaasi oo ka howlgala deegaanada ka tirsan maamulka ximan iyo xeeb.
Inta uu socdo tababarka ayaa wariyaasha waxa ay qaadanayaan casharo la xiriira gudinta war qaabeynta iyo ansharaxa saxaafada waxaana uu soconayaa tababarka mudo dhowr maalin ah.
Qaarkamid ah wariyaasha ka faa’iideysanaya tababarka ayaa sheegay inay ka faraxsan yihiin inay ka soo qeyb galaan tababar sare loogu qaado xirfadooda aqooneed.
Gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Ximan iyo Xeeb Maxamed Maxamud Aw Aadan ayaa sheegay inay ku didaalayaan sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta wariyaasha waxuuna sheegay muhiimada ay siinayaan tayaynta suxufiyiinta.
Ururka suxufiyiinta Ximan iyo Xeeb oo ay ku mideysan yihiin wariyaasha ka howlgala deegaanada Ximan iyo Xeeb ayaa sheegay in tababarkan ay ka filayaan in wax badan uu kusoo kordhiyo xirfadaha wariyaasha.